Mutori weNhau Matendere Otongwa neNyaya yeManyepo muGweru
GWERU — Mutori wenhau, Brenna Matendere, uyo anonyorera bepanhau reThe Zimbabwean, amiswa pamberi pedare neChina akatarisana nemhosva yekuti akanyora nyaya yaive nemashoko ekuti mamwe mapurisa maviri, VaJealous Munyati naVaAndrew Konje, vaive vabatwa nemhosva yekumanikidza mumwe musungwa kuti avape chioko muhomwe.
Hurumende inoti nyaya iyi yaive yemanyepo.
Vachipa humbowo pamberi pedare VaMunyati, avo vanoshanda pasi peProvincial Crime Intelligence Unit, vabvuma kuti ivo nemumwe wavo VaKonje vakamiswa pamberi pedare vakatarisana nemhosva yekutsvaga chioko muhomwe muna Chikunguru gore rakapera, asi vati dare rakavawana vasina mhosva.
VaMunyati vati mashoko akanyorwa naMatendere akavabvisa chimiro chavo pabasa ravo semupurisa, uyewo akaita kuti vaonekwe sekoronyera mumaziso everuzhinji.
Matendere ari kuramba mhosva iyi achiti nyaya yaakanyora iyi pakutanga kwaGumiguru gore rapera, aive aiwana kubva kune vanhu vaanovimba navo uye vaive vasina chinangwa chekusvibisa mazita aVaMunyati naVaKonje.
Asi VaMunyati vati semutapi wenhau, Matendere dai akaita basa rake nemazvo, dai akawana chokwadi chekuti vaive vasina kubatwa nemhosva yekutsvaga chioko muhomwe iyi.
Pavabvunzwa negweta raMatendere, VaBrian Dube, kuti vasati vavamhang'arira vaizivana naMatendere here kana kuti kwete, VaMunyati vati kwete.
VaDube vatiwo hapana matanho avakatora ekuedza kutaura nemupepeti webepanhau reThe Zimbabwean kuti nyaya iyi igadziriswe.
VaDube vati kumhanyira kukwidza nyaya kumatare kwakaitwa naVaMunyati kuda kushandisa matare nenzira isiri iyo, uye kuda kuedza kutyisidzira Matendere pabasa rake rekutapa nhau.
VaDube vati Matendere haanganzi ane mhosva yekusvibisa VaMunyati nekuti vange vasina chikonzero chekuita izvi sezvo zviri pachena kuti vaviri ava vaive vasingazivani nyaya iyi isati yasvitswa kumapurisa.
VaMunyati vabvuma kuti vachiri vakamiswa basa kubva muGumiguru wegore rapera vachipomerwa mhosva yekusvibisa basa rechipurisa, asi varamba kuti izvi zvinoratidza kuti pane mubvunzo pamusoro pehunhu hwavo.
Kutongwa kwenyaya iyi kuchaenderera mberi musi wa 2 Kubvumbi apo VaKonje vanotarisirwa kupawo huchapupu hwavo mudare.
Muzvare Sithembiso Ncube ndivo vange vari mutongi wedare, VaMunyaradzi Kuvheya vari muchuchisi.